MH Overview - Nezvedu - Ningbo MH
Ningbo MH Indasitiri yakagadzirwa mu1999, inoshandiswa mune zvokupfeka zvipfeko uye zvinhu zvokugadzirisa. Mushure memakore ekufambisa, MH yakagadzira ukama hwebhizimisi nemamwe nyika ye150, Mh ikambani yakatarwa se "Top 500 China Service Industry" uye "AAA Trustworthy Company", uye "MH" yekutengeserana inozivikanwa zvikuru mumisika yepamusha uye yepamhenderekedzo .
Ne 16 makore 'kukura, iye zvino MH ane vanopfuura 3,500 vashandi, 5 huru yekugadzira zvigadzirwa (total 382000m2), nekugadzira simba kusvika ku 1500tons / mwedzi Kusona tsvimbo, 200tons / mwedzi embroidery thread, uye 700,000y / mwedzi lace chivara. MH zvakare akagadzira kushanda kwenguva yakareba pamwe nevanopfuura 1500 vadziri vehuwandu hwe1000 rudzi rwakasiyana tailor's materials.
Iye zvino MH ine mahofisi eEnternet overseas munyika dzakasiyana-siyana, kupa vashandi kupindura nokukurumidza kushanda kwenharaunda, uyewo ne ERP yedu, MH APP uye imwe IT system, MH inogona kupa mutengi maitiro evanhu pachavo. Hazvina mhosva kuti mutengi anobata sei neMH, neE-mail, fax, foni, APP IM kana kutarisana nechiso, mutengi anogona kugara achiwana basa rakanaka, rinokurumidza uye rinyanzvi.
MH ichaita basa rinopfurikidza rokugadzira umambo hwezvinhu zvekugadzirisa zvinhu, kupa vashandi zvizere, chikamu chakanaka, pa-nguva yekutakura, yakakodzera-yakanakisisa tailor zvinhu zvezvinhu.
MH Overview musha Categories --Threads --Zizi --Ribbon & Tape --Ropa --Vanhu - Buttons --Interlining - Tassel & Fringe / Kuchengeta - Kubatsira Zvinhu --Garments & Accessories --Sewing Machine & Parts --Fabric - Vamwe Nezvedu --MH Overview --MH Industrial --- Thread Factories --- Ribbon & Tape Factories --- Laces Factories - Sei kusarudza isu --MH History - Tara Shows --Image Galleries --Video Album MH Culture - Zvikoro Zvikuru --MH Dreams - Basa rezveMhuri Taura nesu --Inzvimbo nzvimbo --Inzvimbo yakakodzera --Gadzira nzvimbo --Feedback Community --Join Us --News